ထိုင်းနိုင်ငံက မြန်မာဒုက္ခသည် စခန်းများ မကြာခင် ပိတ်မည် | AAR - သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန
← ငါ ဦးဆောင်ရာ လိုက်ခဲ့စမ်းပါ
ငုံ့မခံရဖို့ တုံ့ပြန်ကြစို့ →
ထိုင်းနိုင်ငံက မြန်မာဒုက္ခသည် စခန်းများ မကြာခင် ပိတ်မည်
ရခိုင်ဒုက္ခသည်များ မဟာမိတ်အဖွဲ – ပြန်ကြားရေးဌာန
ဧပြီ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မြန်မာဒုက္ခသည် စခန်းတခု
ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ သူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မြန်မာလူမျိုး ဒုက္ခသည် စခန်းတွေကို မကြာခင်မှာ ပိတ်တော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်အတွင်း ပထမဆုံး အကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲလည်း ပြီးမြောက်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အမြဲတစေ နေထိုင်နေကြတဲ့ မြန်မာလူမျိုး ၁ သိန်းကျော်ကိုလည်းပဲ မိခင်နိုင်ငံကို ပြန်ပို့တော့မယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံ အစိုးရ အရာရှိတွေက ဒီကနေ့မှာ တရားဝင် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
“သူတို့အနေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နေထိုင်လာတာဟာ နှစ်ပေါင်း ၂ဝ ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါဟာ သူတို့တွေကို စောင့်ရှောက်ရဖို့ ကျနော်တို့အတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး တခုလို ဖြစ်နေပါတယ်” လို့ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ အုပ်ချုပ်ရေး အရာရှိကြီး တာဝမ် ပလိန်ဆရီ က ဝန်ကြီးချုပ် အဘီဆစ် နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ အစည်းအဝေးအပြီးမှာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
“ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို ဘယ်တော့ ပိတ်မယ်ဆိုတာ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ဒီလိုမျိုး လုပ်တော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီးပါပြီ။ ပြီးတော့ မြန်မာအစိုးရနဲ့ လည်းပဲ ဒီကိစ္စကို ဆွေးနွေးနေကြပါပြီ” လို့ သူက ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Posted on April 12, 2011, in သတင်းကဏ္ဍ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.